Kulan looga hadlayeey Amniga oo Muqdisho ka dhacay – Radio Daljir
Juunyo 9, 2019 6:27 b 0
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yariisow) ayaa shir guddoomiyay kulan looga hadlayay Amniga Caasimadda oo xalay ka dhacay xarunta Guud ee qeybta Booliska.
Kulankan ayaa waxaa ka qeyb galay Wasiir kuxigeenka Amniga, Guddoomiye kuxigeenka Amniga Gobolka Banaadir, Taliyaha Booliska Soomaaliyeed iyo Saraakiil ka tirsan Booliska.
Kulankan ayaa diiradda lagu saaray dardar gelinta Sugida Amniga, is dhex galka bulshada, deriseynta iyo horumarka Caasimadda, waxaana la isku afgartay in la sii xoojiyo howlgalada lagu sugayo amniga Caasimadda.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa kula dardaarmay Ciidamada in la dardar geliyo sugida Amniga Caasimadda oo muddooyinkii u dambeeyay xilliyada qaar ka dhacayeen falal amni daro.
Maalmihii Ciida ayaa waxaa si aad ah loo adkeeyay amniga magaalada Muqdisho, iyadoo ciidamada ay xireen jidad dhowr ah oo isku xira xaafadaha.